सरकारमा हुँदा पनि अदालत हाम्रै विरुद्ध प्रयोग भयो : केपी शर्मा ओली | सुदुरपश्चिम खबर
सरकारमा हुँदा पनि अदालत हाम्रै विरुद्ध प्रयोग भयो : केपी शर्मा ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालत आफूविरुद्ध प्रयोग भएको बताएका छन् । उनले सेना र प्रहरी प्रयोग गर्न नसकिएपछि अदालत प्रयोग भएको आरोप लगाए ।
काठमाडौंमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ’हामी सरकारमा हुँदा पनि अदालत हाम्रै विरुद्ध प्रयोग भयो । सेना पुलिस प्रयोग हुन पाएन । अदालत प्रयोग गर्दै पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री छुट्टी र अर्को प्रधानमन्त्री चयन गरियो ।’
सत्तारुढ गठबन्धनलाई लोकतन्त्रविरोधी भएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखेका छन् । उनले भने, ’पाँच दलीय गठबन्धन लोकतन्त्रका भक्षक हुन्, लोकतन्त्र भक्षी हुन् । यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ देश होइन ।’
’प्रचण्ड–बाबुराम बाँचे, बाबुरामले छोराछोरी बेलायत पढाए’
ओलीले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा १७ हजारको मृत्यु हुँदासम्म पनि त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाल बाँचेको बताए । उनले भने, ’प्रचण्ड बाँचे, १७ हजार मरे । बाबुराम बाँचे, बाबुरामका छोराछोरी त बेलायत पढ्थे ।’
’हामी बेलायत जान भिसा पाउँदैनथ्यौं । बाबुरामका छोराछोरीले भिसा पाउँथे । के जादु होला त्यसमा ? एउटा भूमिगत क्रान्तिकारी नेताका छोराछोरीको बाउको नाउँ त चाहिन्छ, नागरिकता चाहिन्छ, नागरिकता पाउन, पासपोर्ट पाउन । कुन पासपोर्टबाट जानुभएको ? कहाँ भिसा लाग्यो ? बाबुरामजी बताउनुस् त ?,’ ओलीले थप प्रश्न गरे, ’बेलायतमा २, ४, ५ लाख खर्च हुन्छ महिनाको । कहाँ कमाउनुभएको थियो भूमिगत हिँड्दाखेरि ?’
माओवादी नेताहरू भूमिगत हुँदा युरोप घुमेको ओलीको दाबी थियो । उनले आफूहरूको प्रहरी रेकर्ड खराब भएको भनेर पासपोर्ट नपाएको बेला विद्रोही नेता भने युरोप घुमेको बताए । ’पुलिसको रिपोर्टले दिँदैनन्थ्यो । मैले २०४८ सालमा सांसद भएपछि पासपोर्ट बनाएको । हाम्रो पुलिस रेकर्ड खराब, प्रचण्ड–बाबुरामको पुलिस रेकर्ड खराब थिएन ?’ ekantipur.com बाट सभार